शताब्दीऔं पहिले कस्तो थियो रानीपोखरी ? हेर्नुहोस् ऐतिहासिक र दुर्लभ तस्बिरहरू
रानीपोखरी काठमाडौं नगरको मध्य भागमा अवस्थित एक मानव निर्मित पोखरी हो । ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पदा रानीपोखरी काठमाडौंमा छ । यो सुन्दर पोखरीको पूर्वमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शमशेर राणाले बनाएको घण्टाघर, राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेर राणाले बनाएको त्रिचन्द्र कलेज छन् भने पश्चिममा नेपालकै सबै भन्दा पुरानो विद्यालय दरबार हाइस्कुल रहेको छ ।
त्यस्तै, उत्तरमा विश्वज्योती सिनेमाघर छ भने दक्षिणमा रत्नपार्क छ । रानीपोखरीको बीचमा बालगोपाल महादेवको मन्दिर छ, यो मन्दिर वर्षमा एक दिन तिहारको भाइटिकाको दिनमा मात्रै खुला हुन्छ । रानीपोखरीलाई वरिपरि फलामको बारले बारिएको छ । रानीपोखरीको बारभित्र ठूलो हात्ती र त्यस माथि राजा प्रतापमल्ल, रानी र छोराको मूर्ति स्थापित गरिएको छ ।
आफ्नो माइला छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपश्चात राजा प्रताप मल्लले शोकाकुल रानीलाई खुसी तुल्याउने उद्देश्यले इ.सं. १६६५ मा उक्त पोखरी निर्माण गरेका थिए । पोखरीको दक्षिण किनारमा हात्तीको मूर्तिमाथि आफू र आफ्ना दुई छोरा मोहिपतेन र चक्रवर्तेन्द्रको सालिक पनि राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएका थिए । १ सय ८० मिलर लम्बाइ र १ सय ४० मिटर चौडाइ रहेको सो पोखरीले ६२ रोपनी १३ आना क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
वि.सं. १९९० को भूकम्पमा मन्दिरको गजुर भत्केपछि जुद्ध शमशेरले रानीपोखरी मन्दिरलाई अहिलेको स्वरूप दिएका हुन् । वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको ७.८ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पमा मन्दिरको गजुरसहित मन्दिर क्षति भएको थियो । भूकम्प गएको एक वर्ष पारी २०७३ वैशाख १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण कोर्षको सिलन्यास गर्नुभएको थियो । अहिले पुनःनिर्माण कार्य जारी छ ।
– नेपाली विकिपिडियाबाट
भूकम्पबाट भत्किनुअघिको रानीपोखरी ।
भूकम्पबाट भत्किएपछिको रानीपोखरी ।
निर्माणाधीन अवस्थाको रानीपोखरी ।